"ရေ " ကိုမကာကွယ်သ၍ မျိုးတုံးမှုကို တားဆီးလို့မရနိုင် - Myanmar Water Portal
COLOMBO, Sri Lanka, May 31 2019 (IPS) -ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဇီဝမျိုးကွဲများ ပျောက်ဆုံးခြင်းသည် စိုးရိမ်ဖွယ်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အပင်နဲ့တိရစ္ဆာန် မျိုးစိတ် တသန်းကျော်လောက်ဟာ ယခုအခါမှာ မျိုးတုံးမည့်အန္တရာယ် ရှိနေပြီလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည့် အချိန်ကာလဟာ နီးကပ်နေပြီဖြစ် ပြီး တကမ္ဘာလုံးမှ အရေးတကြီး သတိရှိနေသင့်ပါပြီ။
နိုင်ငံတွေကတော့ ဒီအရာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမိကြမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေချို ဂေဟစနစ်ကို ရေရှည်မှာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့ တာဝန်ယူကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ရေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့ဟာ လူသားနဲ့ ဇီဝမျိုးကွဲ တွေအတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်။
ရေချို ဂေဟစနစ်ဟာ ဇီဝမျိုးကွဲများ အတွက် အရေးပါသော ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ဟာ ၎င်း ရေချို ဂေဟစနစ် မှ သတိမထားမိပဲနှင့်ပင် အကျိုးများစွာရရှိနေသည်။
ရေတိမ် ေရေဝပ် ဒသ တွေ ဟာ သောက်ရေအတွက် သန့်စင်ပေးပြီး ငါးဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကုန်စည်ဖလှယ်ရောင်းချမှုအများဆုံးမှ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ရေလွှမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်သည့်ထိခိုက်မှုများအား လျော့နည်းစေသည်။
အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ် မှ အထောက်အပံ့ပေါ်မှီခိုနေရသူတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင်းရဲဆုံးဖြစ်ကြပြီး အများဆုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆုံးရှုံးမှုမှ ဒဏ်အထိဆုံးသူများဖြစ်သည်။
သို့ပေမယ့် ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ မရွေး ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကျန်းမာကောင်းမွန်သော ဂေဟ စနစ်ပေါ်တွင်မှီခိုနေရ သောကြောင့် ဂေဟစနစ်များပျက်စီးခြင်းနှင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆုံးရှုံးခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်ကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းသော ကမ္ဘာ ဇီဝမျိုးကွဲ ကြွယ်ဝသော ရေတိမ်ရေဝပ်ဒေသ များသည် ၁၉၇၀ ကာလများကတည်းကပင် ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်း ရေတိမ်ရေဝပ်ဒေသများ (ရေချိုနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသ) မှ နှစ် စဉ် ရရှိနေသော အကျိုးရလဒ်များသည် ခန့်မှန်းချေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၆.၂ ထရီလီယံ နီးပါး မယုံနိုင်လောက်အောင် ရရှိနေသည်။ ၎င်း တန်ဖိုးသည် ကမ္ဘာသစ်တောများမှ ရရှိသည်ထက် နှစ်ဆနီးပါးဖြစ်သည် ။
အဏ္ဏဝါ ဂေဟစနစ် ရေရှည်တည်တံစေသော စီမံခန့်ခွဲမှု (ယေဘုယျရရှိနေသော ရေသယံဇာတအပါအဝင်) သည် ဂေဟစနစ်မှ ပေးစွမ်းနေသော ၎င်းအကျိုးအမြတ်များ ဆက်လက်တည်တံနေရန် ဦးတည်သင့်သည်။
ဤလမ်းကြောင်းသစ်ကိုပြောင်းပြန်လုပ်ရန်အဓိကချဉ်းကပ်နည်းသည်ရေကိုဂေဟစနစ်များရေရှည်တည်တံ့စေမည့်နည်းလမ်းဖြင့်ရေဆက်လက်စီးဆင်းမှုကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အဏ္ဏဝါ ဂေဟစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းစေပြီး လူသားတို့၏ စီးပွားရေး၊ ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် သုခချမ်းသာကိုထောက်ပံ့မည်ဖြစ်သည်။
ရေစီးဆင်းမှု၏ မှန်ကန်သော အရေအသွေး၊ ပမာဏနှင့် အချိန်အား ထိန်းသိမ်းခြင်းဟု ခေါ်ဆိုပြိး "Enviromental Flow"အတိုကောက် နေဖြင့် E-Flow ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက သတ်မှတ်ထားပါသည်။
စီးပွားရေ တိုးပွားလာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့် လူသားတို့အလားလာအတွက် ထောက်ပံခြင်းမှသည် ရေ သည် ကျွန်တော်တို့ ၏ ရေရှည် တည်တံခိုင်မြဲသော ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ပန်းတိုင်တွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်လျက်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ရေရှည်တည်တံသော ရေအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအား ပြင်ဆင်ပြီဆိုပါလျှင်
အချို့သော ကုန်သွယ်ဖောက်ကားမှုဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်များအား ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ပိုမိုလိုအပ်လာသော သီးနှံထုတ်လုပ်မှုများအတွက် ဆည်မြောင်းများတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်းဟာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အခြားတဖက်တွင်လည်း ဆည်မြောင်းတိုးမြှင့်ခြင်းသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ သစ်တောများနှင့်အခြားပျက်စီးလွယ်သောဂေဟစနစ်များအပေါ် အကြီးအကျယ် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုဖြစ်စေပြီး ဇီဝမျိုးကွဲများအတွက် အကာအကွယ်လျော့နည်းသွားပြန်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဆည်မြောင်းတိုးချဲ့မှုသည် မြစ်နှင့် အခြား ရေနေဒေသများမှ ရေကို ဖယ်ရှားပစ်ပြီး ရေနေ ဂေဟစနစ်အတွက် ဆိုးကျိုးရလဒ်များမလွဲမသွေ ဖြစ်လာစေသည်။
စိန်ခေါ်မှုမှာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုကို လျှော့ချရန်ဖြစ်လာသည်။ထို့သို့ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်းများသည်သိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင် တရားမျှတှုရှိရမည်ဖြစ်သည်။ E-Flow ကိုအသေးစိတ်အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းသည် ကုန်သွယ်မှုအား ရှင်းလင်းစေသည်။
E-flow အကဲဖြတ်မှုများမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များသည် ကဏ္ဍအသီးသီးနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြားအရေးကြီးသောဆွေးနွေးမှုများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
၎င်းရလဒ်များသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီ ရေရှည်တည်တံစေရန် ကူညီဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည် ။
နိုင်ငံတကာ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းမှ E-Flow အကဲဖြတ်ချက် အတွက် နည်းပညာများအား ဖြည်းဖြည်း ချင်း တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုလွန်လာပြီဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ စီမံချက်တစ်ခုတွင် IWMIသည် WWF-India နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံ၏ E-flow အပြင်းထန်ဆုံး အကဲဖြတ်မှုအား နိုင်ငံ၏အထင်ကရ Ganges မြစ်အတွက် ပထမဆုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယအစိုးရသည် E-Flow သဘောတရားကို National Ganga မြစ်ဝှမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့Clean Gangan နိုင်ငံရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
အကျိုးတူပူးပေါင်းသူများနှင့်လက်တွဲ လုပ်၍ IWMI မှသုတေသီများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကွန်ပျူတာမှအလွယ်တကူအကဲဖြတ်နိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည့် E-flow calculators ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မကြာသေးမီကာလက ၊ IWMI မှ သုတေသီများသည် အနောက် နီပေါ ရှိ မြစ်များတွင် ၎င်းတို့၏ E-Flow တွက်ချက်မှု ကို တိုးမြှင့် လေ့လာနိုင်လာသည်။ ထိုသို့သော တိုးတက်မှုရလဒ်သည် ယခုအခါ E-flow အကဲဖြတ်မှုကိုမတူကွဲပြားသောအခြေအနေများတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုအတွက်အသင့်ဖြစ်စေသည်။
(IWMI* International Water Management Institute =နိုင်ငံတကာ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း)
နိုင်ငံတိုင်းမှပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေစီမံခန့်ခွဲခြင်း ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု အတွက် ကြိုးစားမှုအထောက်အပံ့ကြောင့် E-flow တွက်ချက်သူများ၏အချက်အလက်များဖြင့် water stress ကို ခြေရာခံရာတွင် ပံ့ပိုးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
(water stress *ရေရှားပါးမှုပြဿနာဟု အတိုချုံးခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ )
ဥပမာ အနေဖြင့် ရေချိုစီးပွားရေး လုပ်ငန်း ဘယ်လောက်ပမာဏသည်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်သော ထောက်ပံ့မှု (Renewable supply)နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မည်မျှသည် ထုတ်ယူသုံးစွဲပြီးပြီလဲ၊ အခြေခံ ဂေဟစနစ် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင် ဂေဟစနစ် ဆောင်ရွက်ချက်များထိန်းသိမ်း ထားရန် ရေပမာဏမည်မျှ မြစ်ထဲတွင် ထားသင့်သလဲ ဆိုတာတွေဖြစ်တယ်။
ဇီဝမျိုးကွဲများ အများဆုံး သည် ရေ ကို မှီခိုနေရသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အတွက် ရေ စီမံခန့်ခွဲမှု အား ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရန် မေ့လျောနေကြသည်မှာ မျိုးစိတ် မျိုးသုန်းမှု၏အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ရေနေဂေဟစနစ် နှင့် ၎င်းတွင် မှီတည်းနေထိုင်သော မျိုးစိတ်များ၏ ဆုံးရှုံးမှု အား တားမြစ်ရန် ညီညီညွှတ်ညွှတ်ပူးပေါင်း အားထုတ်ရန် အချိန်ဟာကျရောက်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Translated by Tin San Khine.
Source - ​We Can't Halt Extinctions Unless We Protect Water - Inter Press Service New Agency
Over 60% of Myanmar's mangroves deforested in the ...
Waste Water Drinking Water Water Quality Ecosystem Services Dams & Bridges Urban Development Flooding Climate Change Integrated Water Resources Management Groundwater